A.Cole oo raali gelin ka bixiyey oraahdii qaldaneyd ee uu ku dhaleeceeyey FA-ga. - Caasimada Online
Home Warar A.Cole oo raali gelin ka bixiyey oraahdii qaldaneyd ee uu ku dhaleeceeyey...
A.Cole oo raali gelin ka bixiyey oraahdii qaldaneyd ee uu ku dhaleeceeyey FA-ga.
Daafaca kooxda Chelsea Ashley Cole ayaa raali gelin ka bixiyey qaladkii uu ku galay aalada bulshada ee Twitter, kaasoo uu si qalad ah ugu cambaareeyey go’aanka FA-ga.
Shalato ayuu daafaca bidix ee xulka England ku qoray akoonkiisa Twitter, hadalo uu ku gocanaayey go’aanka xiriirka Kubada cagta Ingiriisku ay ku sharaxayeen sababaha loo cuskaday ganaaxii afarta kulan ahaa ee la dul dhigay kabtanka Chelsea John Terry. Cole ayaana ku gocday hadalo aan wanaagsaneyn isagoo ku qoray akoonkiisa: “Hahahahaa, wax wanaagsan ayey sameeyeen #FA-gu miyaan been sheegay, “Bunchoft****” ka hor inta uusan ka tiring Twitter-ka.
Si kastaba, 31 jirkaan ayaa si lixaad leh uga cudur daartay. : “Aad ayaan uga murgoonayaa inaan wax aan gocanaayo waqtigaan ku qoro Twitter-ka. Raali gelin ayaan oraahdeydii qaldaneyd oo aan uga hadlay FA-ga.” Ayuu yiri Cole.